Vatosoa efa voatefy : hitrandrahana tsy misy mpanelanelana ny tsena ivelany | NewsMada
Vatosoa efa voatefy : hitrandrahana tsy misy mpanelanelana ny tsena ivelany
Nambara, omaly teny amin’ny MBC Ivato, ireo mpanefy vatosoa telo voalohany vokatry ny fifaninanana nampanaovin’ny IGM sy ny BCMM ao amin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany.
Tanjona ny hitrandrahana ny tsena any ivelany, porofoina fa mahay manefy vatosoa ny Malagasy, hisian’ny fifandraisana mivantana eo amin’ny mpividy sy ny mpanefy, hampisy vidiny bebe kokoa ny vatosoa avy eto amintsika. Hatramin’izao ry zareo any Azia, Thaïlande, ohatra, malaza amin’ny fanaovana izany asa izany.
Hisorohana izany indrindra, mba hitondra tombontsoa ho an’ny toekarem-pirenena ny hanentanana ireo mpanefy vato sy volamena hiaraka amin’ny IGM sy ny BCMM. Marihina fa tsy latsaky ny roa tapitrisa ny mivelona amin’ny fitrandrahana madinika eto Madagasikara, manampy azy ireo ny mpanao asa tanana amin’ny vatosoa, koa rariny raha tohanana izy ireo.
Anisan’ny firenena fihavian’ny vatosoa karazany maro sy kalitao tsara indrindra eo amin’ny tsena iraisam-pirenena i Madagasikara. Voalohany amin’izany ny safira, saingy solokin’ny firenen-kafa fotsiny ny kalitaon’ny safira avy eto Madagasikara. « Tsy mitsaha-mitombo ny tinady eo amin’ny tsena iraisam-pirenena koa ilaina mazava tsara ny fihavian’ny vokatra iray. Mitady lamina mazava hanaraha-maso izay traçabilité izay ny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena », hoy ny tale jeneralin’ny IGM, Rasolonjatovo Andrianirina.
“Efa mandray fepetra hiadiana amin’ireny fanondranana an-tsokosoko vatosoa sy volamena ireny ny minisitera. Raha ny volamena, ohatra, mahavelombolo ny vokatra efa hita. Amintsika miteny izao, 2.292 kg ny volamena nanaovana tatitra ara-dalàna, taona 2017”, hoy ny minisitra Zafilahy Ying Vah.
18 nandray anjara tamin’ny fifaninanana
Mpitsara dimy, vahiny ny roa amin’ireo
Voalohany Ranarivelo Andrianjakasoa Pierre, 90,9 %
Faharoa Stone’s world Madagascar, 90,3 %
Fahatelo Royality’s gem Madagascar, 87,5 %